Ny telefaona Huawei dia hitsahatra tsy hanana fanavaozana Android | Androidsis
Hitsahatra tsy hamoaka fanavaozana Android ho an'ny telefaona Huawei i Google
Ora vitsy lasa izay dia nambara fa saika hanao sonia didim-panjakana i Donald Trump izay hanakana ny fivarotana telefaona Huawei any Etazonia, azonao vakiana amin'ity rohy ity. Nanamarika ny marika sinoa fa tsy manahy momba an'io fepetra io izy, noho ny fisiany voafetra amin'ny tsena amerikana. Na dia toa ratsy kokoa aza ny vokatr'ilay orinasa. Araka ny Google dia miomana ny hampitsahatra ny famoahana ireo fanavaozana ho an'ny telefaonin'izy ireo.
Noho io didim-panjakana io dia hanao finday Huawei very fidirana mivantana amin'ireo fanavaozana ny rafitra miasa. Ho fanampin'izay, ny telefaona manaraka an'ny marika navoaka eny an-tsena dia tsy hanana Play Store na fampiharana Google hafa, toa ny Gmail. nyEny, haino aman-jery maro any Etazonia no efa manao tatitra.
Ho vonona hiatrika an'io toe-javatra io i Huawei, satria efa fantatsika nandritra ny volana maro fa efa niomana ny orinasa ny rafitra fiasanao. Na dia ity fanapahan-kevitr'i Google ity aza kapoka mafy izany ho an'ny marika sinoa. Ankoatr'izay, ny didim-panjakana dia mety hidika koa fa ny orinasa amerikana dia tsy hivarotra na inona na inona amin'ny orinasa sinoa.
Toe-javatra iray izay mampatsiahy ampahany ny ZTE niaina tamin'ny taon-dasa, ary manohy mandrahona ny hitranga izy io, satria i Donald Trump dia efa nilaza mazava an'izany indraindray nikasa ny hanakana ny varotra ataon'ireto orinasa roa ireto any Amerika. Zavatra iray ofisialy amin'izao didim-panjakana izao izay tsy isalasalana fa misy vokany maro.
For now Tsy manana valiny avy amin'i Huawei momba ity mety fanapahan-kevitra noraisin'i Google ity izahay. Google ihany koa dia tsy nanamafy an'ity vaovao ity. Amin'izao fotoana izao dia misy tatitra isan-karazany avy amin'ny haino aman-jery amerikana izay manondro ity toe-javatra ity. Noho izany dia tsy maintsy miandry isika mandra-pahafantatra bebe kokoa amin'ity lafiny ity ny zavatra hitranga.
Huawei dia mety ho voatery hampiasa ny rafitra fiasany manokana. Na mety afaka volana vitsivitsy dia hiverina ho tony ny raharaha. Na inona na inona mitranga, mitohy ny fihenjanana eo amin'i Sina sy Etazonia miaraka amin'ireo karazana hetsika ireo. Manantena valiny vitsivitsy avy amin'ny orinasa izahay atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Hitsahatra tsy hamoaka fanavaozana Android ho an'ny telefaona Huawei i Google
Lenovo Z6 Fanontana ho an'ny tanora dia tonga amin'ity herinandro ity: Sary voalohany sy antsipirian'ny ofisialy
Ny 586 MP Sony IMX48 no protagonist an'ny mody sary any aoriana an'ny Redmi K20